China Electronic ngelaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
Ilaphu elektroniki ligama eliqhelekileyo lendwangu yeglasi yefayibha yeglasi esetyenziswe kwimveliso ye-elektroniki. It is a elektroniki grade iglasi ifayibha ngelaphu kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu. Iinkcukacha eziphambili ziyi-7637, 7630, 7628, 7615, 1506, 2116, 2113, 3313, 1080, 106, 104, esetyenziswa ikakhulu ekwenziweni kwamacwecwe obhedu.
IGAMA 7637 7630 I-7628M 7628L 7615 7615H
ISILUMKISO ECG75 1/0 ECG67 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0
UTHILE (g / m2) 228 ± 5 220 ± 5 210 ± 5 I-198 ± 5 160 ± 4 178 ± 4
UBUNTU 0.210 ± 0.185 ± 0.02 I-0.180 ± 0.02 0.173 ± 0.012 0.135 ± 0.012 0.140 ± 0.012
IGAMA 1506 2116 2113 3313 1080 106
ISILUMKISO I-ECE110 1/0 I-ECE225 1/0 I-ECE225 1/0 IECDE300 1/0 IECD450 1/0 I-ECD900 1/0
WEFT I-ECE110 1/0 I-ECE225 1/0 IECD450 1/0 IECDE300 1/0 IECD450 1/0 I-ECD900 1/0
UXELWE (g /) 164 ± 3 I-105 ± 3 78 ± 3 81.4 ± 2.5 47.5 ± 2.5 24.5 ± 2.5
Ubukhulu 0.150 ± 0.012 I-0.100 ± 0.012 0.079 ± 0.012 0.084 ± 0.012 0.055 ± 0.012 0.033 ± 0.012
E-Glass Fibreglass ilaphu ubunzima ukukhanya ephothiweyo izinto ezidityanisiweyo ezisetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso, elwandle, nakwizicelo zearospace. Ingubo yeglasi ye-fiberglass ithathwa njengomgangatho womzi mveliso kwaye ibonelela ngolungelelwaniso oluphambili phakathi kweendleko kunye nokusebenza. Ine-drapability egqwesileyo kwaye icoceke kakhulu ekusebenzeni xa kuthelekiswa nokusika umsonto we-fiberglass mat, kwaye ibiza kancinci kune-S-Glass yelaphu yokunciphisa amandla kwicala ngokuthelekisa icala. Le fiberglass ephothiweyo yenziwa apha kubavelisi base China, ukuze sikunikeze ngemveliso engaguquguqukiyo eyenziwe ngemigangatho ephezulu onokuthembela kuyo.
1. Ngaba ungumzi-mveliso okanye urhwebo?
A: Singumvelisi oqeqeshiweyo.
2. Sinokuqinisekisa njani ukuba umgangatho?
A: Soloko isampulu yemveliso yangaphambi kwemveliso. Ngalo lonke ixesha uvavanyo lokugqibela ngaphambi kokuthunyelwa.
3. Ngaba unokuyivelisa imveliso ngokweemfuno zabathengi?
A: Ngokuqinisekileyo, singumvelisi oqeqeshiweyo, i-OEM kunye ne-ODM zamkelekile zombini.
A: Changzhou jiashun izinto ezintsha Co., Ltd., eyasekwa ngo-2000, ishishini yenzululwazi kunye nobuchwepheshe ngokukodwa ukusebenza iintlobo ngeentlobo ifayibha yeglasi ilaphu, ingubo umlilo njalo
Egqithileyo Ingubo enkulu
Okulandelayo: Indwangu yoshishino